यदि, कुनै पदमा बसेको मानिसले आफ्नो तलब काटेर सहयोग गरेको छ भने मान्नुस, उ सबैभन्दा ठुलो भ्र’ष्टाचारी हो । – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
यदि, कुनै पदमा बसेको मानिसले आफ्नो तलब काटेर सहयोग गरेको छ भने मान्नुस, उ सबैभन्दा ठुलो भ्र’ष्टाचारी हो ।
हामी जनतामा कति छोटो विचार र कमजोर बौद्धिकता बृद्धि भएको होला ! आमनेपाली यो प’र्दाबाट बाहिर निस्कन किन नसकेका होलान ! अचम्म लाग्छ !
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता, कर्मचारी र समाजसेवीहरुले पाउने तलब वा सुबिधा नलिने रे ! यति महिनाको तलब राहत कोषमा दिने रे ! यति सहयोग गर्यो रे ! अनि हामी बधाइको ओइरो लगाइदिन्छौं । आफ्नो तलब नदिनेलाई दे कि दे भनेर द’वाब दिन्छौं । अनि उसले पनि म यति महिनाको तलब दिन्छु भनिदिन्छ ।
हामी फेरि उसलाई बधाइ दिन्छौं ! हामीले यो सोचेनौं कि, उसले आफ्नो तलब राहतमा दिन्छ भने, उसलाई चाहिने खर्च कहाँबाट आउँछ ?
उसले आफ्नो लाखौं खर्च ब्यबस्था कसरी गर्छ त ? उसले बर्तमानको घर खर्च, ब्यक्तिगत खर्च र भविस्यका लागि जोड्ने, जोडिएका सम्पतिका लागि कति अन्य विकल्प खोज्ला ? ति विकल्प भनेको भ्र’ष्टाचार, घुसखोरी र विभिन्न अ’नियमीतता होइन र ? (ब्यापारी वा ब्यवसायीक ब्यक्ति वाहेक )
हामी यो किन भन्दैनौं, तलब दिनुपर्दैन, मात्र भ्रष्टाचार नगरिदिए त्यो ठुलो राहत हुनेछ । यदि, कुनै पदमा बसेको मानिसले आफ्नो तलब काटेर सहयोग गरेको छ भने मान्नुस, उ सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टा’चारी हो ।
किनकी, दैनिक आउने खर्च कहाँबाट चल्छ ? हजार राहत दिएर, करोड लुट्ने नेता र कर्मचारी अनि कथित राहत दिएको भन्दै ताली पिट्ने जनता भएसम्म हाम्रो गरिबी धरातल र बौ’द्धिक दरिद्र झन झन तल गिर्नेछ ।
(नोट : पैतृक सम्पति नभएका गाउँबाट शहर झरेर राजनीति गरेका नेताहरु र जागिर खाएका कर्मचारीहरुका सवालमा यो महत्वपुर्ण सवाल हुनेछ ।)
Previous दुई विशिष्ट व्यक्तिहरुको तस्बीर सँगै स’माजसेवी रमा ओलीले ३ करोड ज’नतालाई दिईन यस्तो सुझाव!
Next दुःखद् खबर: को’रोना भाइरसभन्दा यशु ठुलो भन्ने च’र्चका पा’स्टरको कोरानाबाट मृ’त्यु!!